I-Scarifiers - iSearch
Qala ingadi Amathuluzi engadini namathuluzi engadini Verticutter
Julayi 28, 2017
1 Isivivinyo se-scarifier 2017
2 I-scarifier - iyaqondakala
4 Yeka indlela lezi zihlukumezi ezihlukene ezisebenza ngayo
5 Yenza okulungile
6 Sebenzisa izesekeli ze-scarifier
7 Gwema kalula amaphutha
8 Ukunakekelwa kwesokunene kokutshani emva kwalokho
9 Ukunakekela nokuhlanza imishini
10 Qasha noma uthenge?
11 Izitayela ze-scarifier
Isivivinyo se-scarifier 2017
Ukuze ukwazi ukujabulela utshani wakho ekusebenzeni kwawo, i Verticutter ungangeni ekugqibeleni ngesikhathi sokunakekelwa kwetshani. Kuzohwebo uzothola amamodeli ahlukene, ahluke kakhulu emanani, ukusebenza kanye nokusebenza. Ukuze wenze isinqumo sokuthenga lula, siqoqe ulwazi olubalulekile kuwe.
I-scarifier - iyaqondakala
Ukuze kutholakale indawo engasenhla, kudingeke ukuba kube khona isisindo. Igama ledivayisi lisuselwe olimini lwesiNgisi - ngokuqondile ukusika. Inhloso ye-scarification ukukhipha umquba, umsila nokhula, amahlamvu kanye nama-lawn-cut material phakathi kwetshani. Imimese yensimbi yentshebezi engena emaphesenti angena kumamitha angama-2 kuya kwangu-3 angena enqabeni engaphezulu. Ukujikeleza kubangela ukuthi indawo engaphansi ihlulwe ngaphandle kokulimaza izimpande ezijulile zomtshani. Ngakolunye uhlangothi, ukhula luvame ukugxila ezimpandeni, ngakho-ke alukakhula. Intshani nayo ikhululiwe kusukela emasimini nase-clover, engasetshenziswa nezinye izindlela kuphela ngobunzima.
Intshani akumele ibe mude kakhulu ukuze kuvunyelwe ukuthi isikhalazo sifinyelele endaweni engaphansi komhlaba. Uma utshani luphezulu kakhulu (ngaphezu kwe-4 mm), utshani kufanele lubekwe ngaphambi kokusebenzisa isikhalazo. Ubude obuphakathi kwe-2-4 mm buhle kakhulu.
Yeka indlela lezi zihlukumezi ezihlukene ezisebenza ngayo
Abahlukumezi abalula futhi abanokonga kakhulu yibo abaqashiwe ngesandla. Ama-blade asesibambisini eside. Ngokufana ne-rake, utshani obutshani bulawulwa ngesandla ngala mathuluzi engadini. Kukhona namamodeli, anamasondo e-2 anjengezandla zokugaya izandla. Ukuhluma nokukhula ukhula. Ukwenza lo msebenzi ngumbonisi ophethe ngesandla akulula njengoba, isibonelo, ukubeka amaqabunga ndawonye. Ngenxa yokujula kokungena kanye nokumelana okuyinto utshani nokhula kuphikisa ukusikwa kwesandla, ukusetshenziswa kwamagatsha amakhulu kungathatha isikhathi eside futhi kube nzima kakhulu. Ukusingatha i-rake ngesikhathi esifanayo ukusebenzisa ukucindezela okuncane kungenye inselele ukuthola umphumela omuhle. Uma ukucindezelwa okuncane kakhulu kusetshenziswa, akuwona wonke ukhula onezimpande ezihlanganisiwe. Uma ucindezelwe kakhulu, utshani luzoqedwa noma izimpande ziyolimala. Ngakho-ke, kufanelekile ikakhulukazi ezintshanini ezincane ezingezona ukhula olunenkani. Ngokuvamile, izindawo ezihlala zihlala zihlala, ezidinga ukusetshenziswa kabusha.
Ezindaweni ezinkulu noma ukwenza kube lula ukusebenza kahle, ama-scarifiers asezinjini ayatholakala emakethe. Lezi zinsiza kakhulu umsebenzi futhi ziletha nemiphumela engcono, ngisho nangaphezulu. Uma kwenzeka amadivaysi aqhutshwa yizimoto, kukhona ukukhetha phakathi kwamagesi kagesi nophethiloli, okubili kokubili kunamathuba nezinzuzo. Njengomshini wokugwilisa utshani, isisindo esinezimoto sishicilelwa phezu kwensimbi. Isithuthuthu siqhuba imishini ngemifino yasentwasahlobo, ebizwa ngokuthi yi-rotation rake. Izindleko zamandla ngaleyo ndlela ziyancishiswa ekuqhumeni idivayisi, lapho kukhona khona amamodeli anesondo elengeziwe. Lezi zinikeza izinzuzo ikakhulukazi emagqabeni emithambekeni. Ukujula kokusebenza kungashintshwa njalo. Amanye amamodeli nawo anama rollers angashintshashintshayo anezikhala ezahlukene. Lokhu kuvumela ukuthi amadivayisi abe ngcono afanelwe nezidingo. Ububanzi bokusebenza ngokuvamile buphakathi kwe-30 no-50 cm. Amanye amamodeli ane-catchbag noma abamba lokho okubamba imfucuza eluhlaza ngokushesha futhi akalele nje emhlabathini. Lokhu akudingeki kuhlangane. Inhloso yokwesaba ukukhipha lezi zinhlayiya eziluhlaza emanzini, ngakho-ke imfucumfucu eluhlaza akufanele ivele ishiywe emaseni emva kwalokho.
Izici ezilandelayo zibalulekile uma ukhetha phakathi kwamagesi kagesi kanye nopetroli. I-scarifier kagesi ilula kakhulu kune-scarifier ye-petroli. Ngakho-ke kulula ukuwashiya futhi, eqinisweni, kulula ukuwuthwala uma kufanele uthunyelwe, isibonelo, noma kufanele uphakanyiswe endaweni ekhethiwe yokugcina isitoreji. Ngaphezu kwalokho, umsindo osebenzayo ukhulu kakhulu, ozuzisa omakhelwane. Ngakolunye uhlangothi, akuvame ukusetshenziswa njengethuluzi eliqondile, okusho ukuthi iningi lomsindo osebenzayo awunaki. Amamodeli ajwayelekile kagesi, eqinisweni, adinga ukuxhumeka kagesi kanye nekhebula lesandiso elithintekayo endaweni yomsebenzi. Kukhona, isibonelo, hhayi uxhumano lwamandla olutholakala kuzo zonke izinhlobo zokulima. Ukushiya ikhebula ngemuva kwabanye abasebenzisi kuyisithiyo, ikakhulukazi uma kunezihlahla eziningi nezimbali endleleni. Ngaso sonke isikhathi, kufanele kwenziwe kabusha ukuze kungabikho noma ukuphule izimbali. Ukunciphisa ikhebula ngesikhalazo kuyingozi engeziwe njengoba ikhebula lizolimala futhi lithathwe indawo.
Izinyathelo ngamabhethri avuselelekayo azenza ngaphandle kokungalungi kwekhebula lamandla. Noma kunjalo, amabhethri anekhono elilinganiselwe futhi kumele aphinde alayishwe, lokhu nge-supply power. Lapha, kungase kuzuze ukuthenga amabhethri amaningana ngesikhathi esifanayo, ukuze ushintsho oluhle lube khona. Ngakho umsebenzi akudingeki uphazamiseke. Isisindo siphezulu kulabo abashintshayo abakhulu kunokwenyuka kagesi ngoba isisindo se-accumulator sinezela. Abahlaziyi bephethiloli abakhululekile ukuxhumeka kwamandla kanye nezikhathi zokufaka kabusha zama-batrijethi ashona. Uma sekugcwele i-petroli, okuyinto okufanele ibe yinto enhle, leyunithi yenza umsebenzi wayo yonke indawo. Isisindo se-petrolium-scarifier eqhutshwayo sikhulu kunaleyo ye-electrovariant, okuyinto eyenziwa enhlabathini enzima. Zingabuye zishintshwe ekuphakameni futhi ngokuvamile zibe nethuba lokushintsha ama-rollers. Emgodini, imodeli enevili lesondo kufanele ikhethwe ngenxa yesisindo. Izinga lomsindo kanye negesi lokukhipha umthelela omubi. Aphinde asebenze ku-push of a inkinobho, kodwa kufanele aqalwe ngombali wekhebula, kungenjalo akukho okuqala kokuqala kagesi okufakiwe. Ama-gasoline izinjini nazo zinamandla kakhulu, okwenza kube nzima ukwenza.
Okufanele ukuhlaziywa yisikhathi phakathi ko-Ephreli naphakathi no-May. Kulungile zalisa futhi vula!
Sebenzisa izesekeli ze-scarifier
Uma i-scarifier isetshenziselwa njalo, kuzoba nezibonakaliso zokugqoka ama-blades ngokuhamba kwesikhathi. Ama-blades aba yizinhlanzi futhi asisekho emsebenzini. Ikakhulukazi uma kunamatshe amaningi nezimpande ebusweni bomhlaba, imimese ibhekene nokusebenza kanzima kwangempela, okungeke kushiywe ngaphandle kwemiphumela. Hlela ukunikezwa kwemimese ukuze kungadingeki ukhathazeke ngakho. Amakhiwe angenalutho ayabonakala ngokucacile. Umsebenzi awuselula, umphumela we-scarification nawo awusenelisekile. Uma uthenge ama-spare blade, awudingi ukuyeka ukuthukuthela ukusebenza. Ukushintsha imimese akulula.
Ukuze uqinisekise ukuthi utshani lwakho luyakwazi ukuphefumula ngokukhululekile futhi, ukukhwabanisa akukwaneli njengendlela eyodwa kuphela. Kubalulekile ukususa yonke imfucuza eluhlaza. Asususiwe, gcina i-oksijeni nokukhanya kwelanga kude nomtshani! Ababulalayo, ngoba ukungabi khona kwe-oxygen nokukhanya kukhuthaza ukuguqulwa kwe-moss. Okuwusizo kakhulu lapha i-fangsack, ebizwa nangokuthi i-Fangfangsack. Kuyinto ekhululekile kakhulu uma umhlaba udoti oluhlaza ngqo kwi-fangsack. Ikakhulu ikakhulukazi ezindaweni ezinkulu lapho i-raking yomsebenzi iba umsebenzi owusizo kakhulu. Ngokuqondile kusuka ku-fangsack, imfucuza ilahlwe kumquba noma ku-bio-ton. Lokhu kusindisa isikhathi esiningi kwezinye izinto. Iphakethe elikhohlisayo kufanele likhethwe ukuze likhishwe.
Uma isikhalazo singenaso isikhwama sesitshalo, izinsalela zotshani, ama-moss nezinye izinsalela eziphilayo zihlala ematsheni. Vele ushiye konke emgodini awukho neze. Ngakho-ke, udinga i-rake njengesinyathelo esibalulekile somsebenzi. Yonke imfucumfucu eluhlaza ingasuswa kalula ngegazi elisebenzayo. Kodwa-ke, kuphela uma indawo yomuntshani isincane. Uma, ngakolunye uhlangothi, indawo inkulu, lo msebenzi ngokushesha uba ingadi enesisindo. I-rake kumele ifakwe emotweni yenqola lapho uthenga isitifiketi, ngakho ungaqala ngokushesha. Ekugcineni kufanele nje ulahlwe imfucuza eluhlaza ngokwemvelo.
Gwema kalula amaphutha
Ngokuyinhloko, ngedivaysi ephezulu, ngesicelo esifanele, akukho amaphutha amakhulu ayenzeka nge-scarification. Noma kunjalo, kunomunye noma omunye umthombo wephutha, ongenakuhlinzeka ngekhwalithi engcono yegqinsi. Kodwa-ke, awukwazi ngokuphelele, ukusiza amathiphu ukugwema amaphutha. Lokhu kubalulekile ngoba umonakalo awukwazi njalo ukulungiswa ngokushesha. Ngamathiphu ethu, i-scarification ayikwazi ukuba nomthelela omubi.
• Uma utshani luphakeme kakhulu, ama-scarifier angeke angene ngaphakathi ejulile angene emhlabathini.
• Izindawo ezivame ukukhubazeka - okungenani kabili ngonyaka kunconywa.
• Ungasebenzisi ngokweqile isikhalazo endaweni efanayo, ngoba izakhiwo ezingenalutho ziyoba umphumela. Ukukhula komsila nakho kunesifo.
• Gwema njalo endaweni eyodwa ukuze kungabikho izindawo ezingaphenduliwe.
• Hlanza umshini emva kokusetshenziswa.
Ukunakekelwa kwesokunene kokutshani emva kwalokho
Ukuze utshani, i-scarification isho uhlobo olunzima. Ngenxa yalesi sizathu, udinga ukunakekelwa okukhethekile. Ekuqaleni ukubona indawo eluhlaza ibonakala ingalungile, kodwa lokhu kuvamile ngokuphelele. Emva kwalokhu ukwelashwa okucindezelayo kungase kungabi phezu komnke kuqala. Mnike isikhathi sokuphumula. Imiphumela emibi kulesi sigaba kukhona amazinga okushisa aqinile kanye nemisebe eqinile yelanga. Kuzo zombili izimo, i-hose engadini kufanele isetshenziswe manje. Manje sekulungile ukusebenzisa imbewu entsha yotshani. Ungakhohlwa ukuphuza utshani emva kwalokho.
Ukunakekela nokuhlanza imishini
Ngisho nkonkontileka ophethe ngesandla akumele ashiywe engalindelekile ngemuva komsebenzi. Bafuna ukujabulisa okuningi emishini yabo kanye namathuluzi futhi bangathembela ekuzimeni kwabo ukukhonza. Ngakho-ke, inhlabathi nodaka kanye nezimpande zempande kumele zisuswe ngokuphelele emaceleni. Kuhle ukuhlanza uma umhlabathi usuvele usomile. Khona-ke uzomane egaye nge-brush eyande kakhulu. Indwangu isusa izinhlayiya ezingcolile. Ungakhohlwa izibambo noma isibambo. Uthuli ngokubambisana ngezandla ukukhweza kungakha ngokushesha ukubola okungcolile. Indawo yokugcina yazo zonke amathuluzi engadini kufanele ibe omile. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezintweni zikagesi zanoma yiluphi uhlobo.
Esimweni sama-scarifiers asezinjini, ama-blades, ama-ventilation slots kanye ne-container yokuqoqa kumele ihlanzwe noma ichithe. Ama-gasoline injini adinga ukunakekelwa okuqhubekayo ngokuhamba kwesikhathi. Izinga lamafutha kufanele lihlolwe ngaphambi kokusetshenziswa ngalunye ukuze kugweme ukulimala kwe-injini. Ngisho noma ukusetshenziswa kukawoyela kuphansi, amafutha enjini angahamba ngokuvuza noma ukugcina okungalungile kweyunithi. Amapayipi ophethiloli kanye nesihlungi somoya kufanele ahlolwe kanye ngonyaka. Kumele bahlanzwe noma bashintshwe uma kunesidingo.
Amanye amamodeli afaka ama-plugs, angahle agcoke futhi aphelelwe amandla. Ngokuvamile bahlukana ngenxa yokuqala izinkinga. I-gasoline ephuma ekuqothulweni noma ekhishwa ngamagesi ikhuphula igesi, ingaba nesibangela se-spark plugs enesici noma i-carburetor engalungile. Uma kwenzeka uphuthumayo sicela uxoxe njalo kumhlangano wokusebenzela izitshalo. I-gasoline, efika ezindaweni ezidwetshiwe ze-petroli scarifier, kumele ihlulwe ngqo ngendwangu. Ukuhlaselwa kwephesolini kudweba futhi kubhubhise ukuvikelwa kokugqwala. Amadivayisi aphethwe ngamagesi kumele agcinwe ngendlela evulekile. Ngokufanayo, kusebenza nophethiloli otholakala emanzini. Ukuqhuma nokuqothulwa komlilo kufanele futhi kugcinwe. Ukuze isitoreji, kunconywa ukuthi usebenzise amakamelo ahlanzekile futhi asebenzayo.
Amathuluzi engadini kagesi, uma engenawo ukuvikelwa kwamanzi, angasetshenziswa kuphela esimweni esomile.
Qasha noma uthenge?
Kukhona ithuba lokuthenga noma ukuqasha umklomelo. Uma mhlawumbe kusetshenziswa isikhathi esisodwa, izindleko zingacatshangwa ngakho. Uma udinga ithuluzi lokulima kodwa izikhathi eziningana, kufanele ngempela ukuthenga. Sizokusiza ukunquma kalula.
Uma ngabe i-scarifier idinga izikhathi eziningana ngonyaka, ukuthenga ngokuqinisekile kuyoba yisinqumo esifanele. Ngokuyinhloko, ubukhulu bendawo okumele bubekwe kuyo babamba iqhaza esinqumweni. Ikakhulukazi ezindaweni ezinkulu ukuthenga kunconywa. Akuzona njalo isimo sezulu esidlala nayo njengoba sifuna. Ukukwazi ukuhamba ngosuku oluhle akuyona inkambo yenkampani ebolekiwe. Ngokuvamile lezi zinsuku, yonke imishini isuqashiwe kakade, okuyinto ecasulayo. Kuyasiza kakhulu uma kugalaji umnikazi we-scarifier ulindele ukusetshenziswa kwayo. Idivayisi yakho siqu yenza ukuthi uzimele ngokwengeziwe.
Ungathenga idivayisi yakho kubathengisi noma ku-inthanethi kumthengisi. Ikakhulukazi kwi-inthanethi izipesheli ezinhle kakhulu zingatholakala. Nansi ukukhethwa okukhulu kakhulu, nolwazi olubalulekile mayelana nesimo ngasinye. Qhathanisa! Ukubuyekeza kwabanye abathengi kwenza isinqumo lula. Uma uthenga ku-intanethi, ungagcina isikhathi, izindleko zokuhamba nemali. Ngokungafani nabadayisi bezobuchwepheshe, uzothola njalo onobuhle bamuva ku-Inthanethi. Ngakho-ke awuwi esitolo somthengi, lowo umthengisi angathanda ukukuletha kumuntu.
Nge-scarification yakho ngokwakho kungenakwenzeka ngokwezimali ukuze ukwazi ukuthenga amamodeli wakamuva njalo. Noma ubani ofaka ukubaluleka okukhulu ngokuhlale up-to-date, ukuthenga mhlawumbe isikhathi eside. Kuyadabukisa ukuthi lapho onobuhle abathathu bekwazi ukuthi bazoba kanjani isibonelo sabo sokushaya ubude. Imishini ethengiwe kumele ihlinzekwe futhi ilungiswe kuhulumeni ozimele, okuyiqiniso okuhlobene nezindleko.
Amacala ngokuvamile aphansi, alondolozwa esikhwameni sakhe. Ngokuvame ukuqashiswa ezitolo ze-hardware. Indlela ekahle yabakhiqizi ukukhangisa. Ngakho-ke, amadivayisi wakamuva ngokuvamile atholakalayo. Ngisho akudingeki ukuba kusetshenziselwe ukugcinwa nokulungisa, okuyiqiniso ngempela. Isikhala sokugcina se-scarifier singabuye sinikezwe.
Izinkinga zicacile kakhulu kunezinzuzo. Umzamo nje ngokubhuka, ukuqoqa nokubuyisa kuyadabukisa. Ngeke uhlale uthola idivayisi uma nje ukugijimela kwamanye abaqashi kukhulu. Ekwindla nangentwasahlobo, zonke izivande zifuna ukusebenzisa i-scarifier. Izikhathi zokulinda okusheshayo nezikhathi eside zokulindela kulindeleke, okungaba ingxenye evusa amadlingozi. Uma idivaysi ikhokhelwe iminyaka eminingana iminyaka eminingana, intengo kaningi ayinakulungiseli ishethi ngokuthengwa. Engeza kwalokho isimo sezulu! Imvula enamandla ngokushesha yenza udada ngokusebenzisa umthethosivivinywa, okwenza isikhathi sokuqashisa singakulungeli ngokuphelele.
Abakhiqizi bamathuluzi okulima balinga ukuhlangabezana nezidingo ezikhulayo zamakhasimende. Ngakho, izindawo ezikhona zingathuthukiswa. Imibono emisha ngokuphelele icebisa imakethe.
Ngokwesibonelo, okokunciphisa umsindo ube eyinkimbinkimbi ngaphezulu uphethiloli Aerator ukunciphisa ongcolile nomsindo. Lokhu akugcini nje ngokukhululekile komsebenzisi, kodwa futhi kwandisa amathuba nezikhathi zokusebenzisa lapho umakhelwane noma imvelo engasayizizwa ephazamisekile. Ngenxa yokuqedwa kokungcola komsindo emadivaysi athile athule, kungokwemvelo ukusebenza nayo ngaso sonke isikhathi.
Enye inkinga yokuqhubekela phambili yi-accumulators yamadivayisi we-accu. Ubuchwepheshe obusha buyanciphisa kakhulu isikhathi sokuvuselela, okusho ukuthi isikhathi esincane silahlekelwa ukulima. Ngesikhathi esifanayo, isisindo nesisindo sithuthukiswa, okwenza imishini ibe lula futhi isebenze isikhathi eside. Isikhathi sokuphila noma inamba yemikhawulo yokukhokhisa nayo ingakhuphuka kakhulu. Imishini yamandla kagesi ijwayele ukusetshenziselwa amahora okuqala noma amahora. Kodwa-ke, ngokuvamile akukakhanyani. Abanye abakhiqizi bacabangela le nkinga ngokukhanyisa uhla lokusebenza lwemimese. Amandla we-energy-saving and bright-emitting diode enza lokhu kwenzeke. Ngakho-ke, ngisho nasezimo ezibucayi, kubonakala ngokuqondile lapho idivayisi iqhutshwa khona. Imibhede yembali ngiyabonga. Imizimba ephujiwe manje ayisakwazi ukunakwa, okugcina ukucubungulwa okusha kwendawo entshani.
Ububanzi bezicelo zabangabonakali banamuhla banwetshiwe. Ngakho kukhona ama-lawnmowers, angasetshenziswa futhi njengama-vertical. Ngakho-ke, ukuthengwa kwedivayisi kuphela, okugcina futhi isikhala ngesikhathi sokugcina. Lawa ma-combi-amadivaysi atholakala ngobukhulu obuhlukahlukene - nge-electrical and electronic likaphethiloli izinjini.
siphoI-Bestseller cha. 1
Isikhafu se-Bosch AVR 1100, umzingeli wotshani, ikotoni (i-1100 W, i-32 cm ububanzi obusebenza, umthamo we-50 l catcher)
Isikhwama se-AVR 1100 - ukunakekelwa okujulile kwetshani yakho
Kususa utshani, umsila nokhula; Sibonga ngokushelelayo nangokusheshisa ku-roller entsha, ezinamandla zensimbi zensimbi kanye nokuvuleka kwe-air inlet
Umsebenzi omuhle kakhulu uphumelela ngisho nangomkhuhlane we-moss osindayo namagqabi anganakiwe ngenxa yensiza enamandla neyenamandla ye-1100 Watt Powerdrive injini
Izikhathi ezinzima zokusebenza kanye nesikhathi esingaphansi esidingekayo sokukhipha ngenxa ye-50-liter catchbox; I-double spable foldable kanye ne-catch catchable ebhokisini yokugcina isitoreji nokunethezeka
Ububanzi bokulethwa: AVR 1100, Fangkorb
Thenga it at Amazon
siphoI-Bestseller cha. 2
AL-KO 112800 Combi Care 38 E Comfort scarifier show
Ukufudumala nokushayisana kweyunithi eyodwa
kufanelekile emagqabeni aphakathi nendawo kuze kufike ku-800 sqm ngenxa yobubanzi obubanzi bokusebenza kwe-38 cm
kufaka phakathi ibhasi lokudoba
okuphakathi phakathi kwe-5-ukuhlunga ukujula kokujula kokushintsha okusheshayo kokujula kokusebenza
I-roll elula yethuluzi-free isuka kusuka mpo kuya emoyeni
siphoI-Bestseller cha. 3
I-WOLF-Garten - Electric Scarifier SV 302 E; 16AFDEKA650Anzeige
Ububanzi bokusebenza: 30 cm
Injini: injini ye-1.200 W
Ukulungiswa kokusebenza okujulile: I-5 ephakathi
I-2 ku-1: I-scarifier ne-Fangsack
I-Fangsack: 35 l
siphoI-Bestseller cha. 4
I-Gardena combisystem-Vertikutier-Boy: isifinyezo esenziwe ngesandla ukuze sisuse i-moss, ukhula kanye nozinzwa, 32 cm ububanzi bokusebenza, namasondo amakhulu futhi nokuphakamisa izembe ngomsebenzi olula (3395-20)
Ukunakekelwa kwentsha okuphumelelayo: I-scarifier ingena i-millimeter ejulile entshanini futhi isuse ngokuphumelelayo umsila kanye ne-turf ezwa
Umsebenzi wokulondoloza umzamo: I-scooter eshaqisayo inamasondo aqinile enephrofayili ekhethekile futhi isiski sokuphakamisa ukuze kube lula ukusebenza
Isistimu ye-plug-in engenayo i-Jig: Ithuluzi legadi lihambisana nazo zonke izibambisi ze-Gardena zokuphatha futhi zingasetshenziswa kalula futhi zifakwe ngaphakathi, ubuchwepheshe obufakazelwe buqinisekisa ukusebenza okuthembekile
Ukuvikelwa kokuqina kokushisa: I-Gardena combisystem ihlaziye umfana yenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-steel ne-duroplastic coating kanye ne-spring spring steel
Ububanzi bokulethwa kufaka phakathi: uhlelo lokuhlanganisa lwe-1x Gardena oluhlukumeza umfana (ukuphatha akuhlanganisiwe, kuthengiswa ngokwehlukana)
siphoI-Bestseller cha. 5
I-Einhell Electric Scarifier Fan RG-SA 1433 (1400 W, 33 cm wide wide works, 3-fold ukuphakama ukuphakama adjustable, 28 L, Kunconywa izindawo kuze kufinyelele 400 m²) isibonisi
Iyunithi ye-2-in1 combi unit enamandla ochungechunge lwemoto ene-1.400 Watt ne-3-ukujula kokusebenza okuguquguqukayo kokunakekelwa kwewawu lobuchwepheshe
Ukususwa ngokungazelelwe kwamanzi nokhula, kufaka phakathi izimpande nge-roll bearing bearing roller ne-20 eminwe yensimbi engenamakha
Ukupholisa okusheshayo nangokucacile kwengca ye-fan-rolling fan-rolling nge-48 claws
Ibha yomhlahlandlela wokulondoloza ukuguqula ukuphakama nokugcina isikhala ngesiphathi soguquko esenziwe ngendlela e-ergonomically
Indawo yokupaka-enobungane yokupaka kanye nokubekelwa odongeni okusebenzayo kwe-stowage ecocekile
siphoI-Bestseller cha. 6
Isikhafu sikagesi se-Einhell GC-ES 1231 / 1 (1.200 W, size sifike ku-300 m², i-8 ummese ophindwe kabili, i-3-isinyathelo esisebenza ngokujula ukulungiswa kwesimo sokuhambisa, isikhundla sokuhambisa isikhwama)
Isikhafu sikagesi iyithuluzi elinensimu elinokwethenjelwa elinamandla: I-motor ewuchungechunge olunamandla ngama-watts ayi-1 aletha i-torque eqinile yokuqhubeka komsebenzi okuqhubekayo kanye nemiphumela emihle engaguquki.
Lapho ngobungcweti bethola utshani obunempilo, isikhafu sikagesi siba umsizi obaluleke kakhulu. I-Scarifier inconyelwa izindawo ezincane eziphakathi nendawo eziphakathi kuya kumamitha skwele we-300.
Ngama-blade aphakeme ayisishiyagalombili asezingeni eliphakeme, i-roller ummese ethwala ibhola isusa ukhula kanye nama-moss nezimpande ngempumelelo enkulu.
Ngenxa yokulungiswa kokujula kokusebenza okungamazinga amathathu, ifenisha yotshani ingashintshwa kahle nezidingo zenhlabathi nezitshalo. Isikhundla esingeziwe sokuthutha sivikela imimese futhi ngasikhathi sinye ngaphansi komhlaba.
Isikhafu sinayo indlu eqinile eyenziwe ngepulasitiki ephezulu, engamelana nomthelela. Amasondo amakhulu enza kube lula ukusebenza ezindaweni ezinzima nokuvikela utshani.
I-Bestseller cha. 7
Isikhali sesandla esinciphisi se-EINHELL BG-HVK 32
siphoI-Bestseller cha. 8
I-IKRA Electric Scarifier Lawn Aerator IEVL 1840 I-Tray 55l Ububanzi bokusebenza 40cm Ukusebenza okujulile okulungisekayo 1.800WAnzeige
I-2in1 Idivaysi yokuqothula kanye nokwazisa okutshani
Kuhl. I-Scarfier roller ne-20 izinsimbi zensimbi & i-fan roller nge-24 ensimbi yomshuwalense we-spring / i-tool-free roller change
Amandla ama-Watts ayi-1.800 / ububanzi obusebenzayo okungama-40 cm / ukujula okusebenzayo kokushintshashintshashintshashintshashintshashintshi kokukhula kwe-+6 kuya ku-12 mm
Ukonga isikhathi: i-bag Isikhwama se-Grass Amandla ama-55 amalitha / anamehlo-abanobuhle, amasondo amakhulu / okunethezeka kahle
Umzila wesitimela wokubamba / ukulandelela umzila wesitimela / isitoreji sokugcina isitoreji / indawo eqinile yokuhlala / ukuxhaswa kwekhebula
I-Bestseller cha. 9
I-WOLF-Garten - Pendulum isikhafu esinezinkanyezi eziningi i-UG-M 3 "INew2018, ebomvu, 35x30x10 cm; i-71AAA035650 isibonisi
Ukuhlanza ngokuphelele utshani lwe-moss kanye ne-lawn bazizwa
I-Pendulum ikhiphe isitifiketi
Amaphethelo angaphandle azinzile, ngoba aqinile kanzima
Kwenziwe eJalimane ”Izinga lethu lifinyelela kunoma iyiphi inselele
I-Bestseller cha. 10
(NEW) HECHT 2-IN-1 uphethiloli onqabile / isifutho sokuthola ukunakekelwa kwe-lawn kahle - I-2,5 kW / 3,4 hp - ububanzi obusebenza ngo-cm cm - isinqe se-40 l utshani - sinama-45 roller wokususa ngempumelelo i-moss nokhula ekubonisweni kotshani
AMANDLA WAMANDLA 4-STROKE ENGINE - Ngamandla enjini engu-2,5 kW / 3,4 HP, i-2-IN-1 lawn isikhafu isusa ngokuthembekile isusa ukhula kanye nokugqwala emhlabathini futhi iqinisekise ukungena komoya okufanele.
2-IN-1 DEVICES DEBICES - Izicelo ezimbili ngomshini owodwa. I-roller rolifying enezinduku eziqinile eziyi-18 ngokumelene notshani obuzwile, imous nokhula. I-fan roller enezinhlayiya zasentwasahlobo ezingama-24 zokuphefumula.
FAST TO TARGET - Njengoba kunobubanzi obukhulu obusebenza ngo-40 cm, i-aerator ye-lawn ilungele ukusebenza ezindaweni ezinkulu ngokushesha, ngoba ikusindisa ohambweni oluningi futhi ushesha lapho uya khona.
UMSEBENZI OWENZELAYO - Isiqalo esisheshayo, sibonga ukubhukuda nokudonsa ukuziqalela, ukuphatha okulula nokusebenza okulula kwenza lesi sandla sibe mncane umsizi obaluleke kakhulu kuyo yonke ingadi.
ROBUST & RELIABLE - Izindlu zensimbi eziqinile namasondo amakhulu anelungelo lobunikazi anokubamba okuphezulu abamba phezulu ngisho nasezindaweni ezimbi. Izesekeli nezingxenye ezisele, kanye ne-lawn mowers kuyatholakala kithi.